‘मेरो निर्देशनमा युवाहरु कुटिएको आरोप झुटा हो’ – Karnalisandesh
‘मेरो निर्देशनमा युवाहरु कुटिएको आरोप झुटा हो’
प्रकाशित मितिः २१ श्रावण २०७७, बुधबार १६:४८ August 5, 2020
कालिकोट। जिल्लाको राष्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष नरजंग शाहीले युवाहरुमाथि भएको कुटपिटमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसअघि कर्णाली सन्देश डटकममा ‘वडा अध्यक्षको निर्देशनमा कुटिएका युवाहरुको अवस्था गम्भीर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। उक्त समाचारमा पीडितहरुले अध्यक्ष शाहीकै निर्देशनमा आफूहरु कुटिएको आरोप लगाएका थिए।
पीडितहरुले लगाएको आरोपलाई तपाईं के भन्नु हुन्छ नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यो सरासर झुट्टा आरोप हो। युवाहरुले आपसमा झगडा गर्छन् र घाइते हुन्छन्। अनि मेरो निर्देशन ? यो आरोप मिथ्या हो। चरित्र हत्या गर्नेकाम हुनु दु: खद छ। राष्कोट नगरमा पर्ने देउरा मालिकामा युवाहरुबीच एक आपसमा झगडा भयो। दुईपक्ष आफन्त हुन्। दुवै पक्षको उपचार गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु मेरो कर्तवय हो।’
उनले अगाडि भने, ‘दुई पक्षको जिम्मेवारी मैले नै लिएको छु। औषधी उपचार पनि मैले नै गरिरहेको छु। गाउँबाट ९ /१० जना मान्छे लगाएर घाइतेहरुलाई बोकेर जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरेका छौं। यसरी म खाना नखाएर उनीहरुकै उपचारमा लागिरहको छु। तर, उल्टै मेरो निर्देशनमा कुटपिट भयो भन्नु कत्तिको न्योचित कुरा हो? थप यस घटनाका सम्बन्धमा छानविन हुन्छ। त्यसपछि पनि सत्य बाहिर आउला। जनप्रतिनिधिको नाताले मेरो वडाका सबै मानिसका लागि म साझा मान्छे हुँ। त्यसैमा आफ्नै आफन्तमाथि मैले किन पक्षपात गर्ने ?’
घटना घटेको दिन आफू गाउँमा रहेको र लेकमा युवाहरुबीच झगडा भएको बताउँदै अध्यक्ष शाहीले भने, ‘घटना भएको दिन म गाउँमा छु। लेखमा झगडा भएको हो। खाना पानी नखाएर, घामपानी नभेर उनीहरुकै उपचार र उद्धारमा जुटिरहेको छु। कुनै पनि राजनीति पूर्वाग्रही केही छन्। भाई र छोराको नेतृत्वमा कुटपिट भएको आरोप गलत हो। यसका बारेमा स्थानीय समाजले पनि यर्थात भन्ला नि।’
यही साउन १८ गते घटेको उक्त घटनामा स्थानीय २२ वर्षीय कृष्ण शाही र २४ वर्षीय प्रकाश शाही गम्भी घाइते छन्। त्यस्तै अन्य घाइते हुनेमा ललित शाही (२७), खग्रेन्द्र शाही (२१), चिरञ्जीवी शाही (१६), हिक्मत शाही (१९) रहेका छन्।उनीहरुको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।